July 2020 - Khitalin Media
ကြာသာပတေး သားသမီးများအတွက် ဘ၀တစ်သက်တာ ကံကြမ္မာအဟောနှင့် အထွေအထွေ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ
July 31, 2020 Khitalin Media 0
ဂြိုလ်ဂုတု ပညာဆရာသခင် နေ့ ဖွား ( ကြာသာပတေး သားသမီးများ ) တသက်တာ ကံကြမ္မာနင့် သိမှတ်စရာများ ကြာသာပတေးသားသမီးများသည်စိတ်ရင်းစေတနာကောင်း၍ ပွင့်လင်းဖြူစင်သောစိတ်အရိုးခံ ရှိကြသူများသာ ဖြစ်ကြပါသည် လူတိုင်းကို ခင်မင်တတ်ကြသူများသာ ဖြစ်ပါမည်လူတဘက်သားကို ကူညီလိုချင်စိတ် ရှိကြသူများဖြစ်သည်ရပ်ရေး ရွှာအရေးနင့် ပရဟိတ အများအကျိုးဆောင်စိတ်ရှိကြသူများသာ […]
ထီပေါက်ရင် ဘယ်လိုထုတ်ရမလည်းဆိုတာ sharing လေး လုပ်ပေးချင်ပါတယ် ထီပေါက်ရင် ထီ ရုံးချုပ် ၃၇လမ်းမှာသွားထုတ်ရပါမယ် ဘာတွေထည့်သွားရမလည်းဆိုတော့ 1. အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း နဲ့ မိတ္တူ 2. မှတ်ပုံတင်မူရင်း မိတ္တူ 3. ထီလက်မှတ် 4.ပတ်စပို့စ် ပုံ ၃ပုံ ( ၅သောင်းဆုဆိုရင်တော့ […]
ဒီဗွီယိုဖိုင်လေးဟာဆိုရင်တော့ ယခုတစ်လော အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ တောရွာတစ်ရွာက ရှိတဲ့တူရိယာနဲ့ အကောင်းဆုံးတီခတ်နေတဲ့ ရွက်ပုံးသီးကလေးငယ်ပါ။ ဒီကလေးက နတ်မောက်မြို့နယ် ကုလားရှင် ကျေးရွာကလို့လည်းသိရပါတယ်။ သူ့မှာရှိတဲ့ အိုးစည် ဗုံလေးတွေ၊ ကလေးဆော့တဲ့ ဒရမ်လေး၊ ပြီးတော့ တော်ယုံလူ လုပ်တတ်ဖို့ တီးတတ်ဖို့မလွယ်တဲ့ အိုးနဲ့လုပ်တဲ့ အိုးဗုံကိုလည်း ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တီးခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းကလည်း […]
ကလေးရှိတဲ့အိမျတိုငျး ဒီရှကျလှပငျကို လုံးဝ မစိုကျသငျ့တဲ့အကွောငျးအရငျး..
ကလေးရှိတဲ့ မိသားစုတွေအတွက် ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ အောက်ပါ ရွက်လှပင် အကြောင်း ဘာသာပြန် ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။အိမ်တွင်း ခြံတွင်း ရုံးတွင်း နေရာတွေမှာ ရွက်လှပင် အမျိုးမျိုးကို အလှပန်း အိုးတွေ အဖြစ် စိုက်ထားလေ့ ရှိကြတယ်။ မျက်စိ ပသာဒ ဖြစ်စေ သလို၊ အခန်းတွင်း လေ […]
သွားကိုက်ခြင်းကို ( ၁ ) မိနစ် အတွင်း သက်သာစေမယ့် အိမ်တွင်းနည်းလမ်းများ
သွားကိုက်ခြင်းကို ( ၁ ) မိနစ် အတွင်း သက်သာစေမယ့် အိမ်တွင်းနည်းလမ်းများ (၁)ဆားပြုတ်ရည် ဆားသည် သဘာဝပိုးသတ်ဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပြီး သွားကိုက်ခြင်းအတွက် လွယ်ကူပြီးအစွမ်းထက်သော နည်းတစ်မျိူးဖြစ်ပါတယ်။ဆား စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဝက်ကို ရေနွေးတစ်ခွက်ထဲသို့ထည့်ပါ။ထို့နောက် ပလုတ်ကျင်းဆေးရည်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ သွားကိုက်ခြင်းကိုသက်သာစေပြီး သွားဖုံးယောင်ခြင်းနဲ့ လည်ပင်းနာခြင်းကိုပါ သက်သာစေပါတယ်။ (၂)ဟိုက်ဒရိုဂျင် ပါအောက်ဆိုဒ် သွားချေးများကို […]
မန္တလေးများ ပိုက်ဆံပေါချက်…၉ သိန်းကျော်ကျော်ကို ကျုံးဘေးလွန့်ပစ်သွားတယ်…
မန္တလေးများ ပိုက်ဆံပေါချက် ၉ သိန်းကျော်ကျော်ကို ကျုံးဘေးလွန့်ပစ်သွားတယ်…. ပိုင်ရှင်သိ့အောင် အော်ပေးကြပါအူးအမျိုးတွေ…. ကျုံးဘေး မနက်တိုင်းပြေး အမှိုက်များတွေ့လျှင်ကောက်၍ ပုံထဲသို့ နိုင်ငံကြီးသားပိသ နေသည်မှာမကြာသေး … သိုသော် ယနေ့မနက် ခင်းတွင် အမှိုက် ဟူ၍ကောက်လိုက်ရာ ငွေထုတ်ဖြစ်နေပါသောကြောင့်ပိုင်ရှင်ထံ ပြန်လည် ပေးအပ်သွားပါ့မည်။ မှတ်ပုံတင် နှင့် အရောင်အဝယ်ဗောက်ချာပါပါသည်။ […]
ညီမေလး အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်
(1)စာတတ်တဲ့ ယောက်ထက် စာနာစိတ်ရှိတဲ့ ယောက်ျားကိုသာ ရွေးချယ်ပါ တစ်မိုးအောက်ထဲ အတူနေထိုင်မဲ့သူဆိုတာ ကိုယ့်ခံစားချက်ကို စာနာစိတ်နဲ့ ကြည့်မြင်တတ်သူ ဖြစ်နေဖို့ သိပ်လိုအပ်တယ် ။ (2)ပညာတတ်သူထက် ကြင်နာစိတ် ရှိသူကိုသာ ရွေးချယ်ပါ ကိုယ့်ဘဝ တစ်သက်တာလုံး အနီးဆုံးမှာ ရှိနေမဲ့သူဟာ ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ကြင်နာတတ်တဲ့ စိတ်နဲ့ ဖေးမနိုင်သူဖြစ်ဖို့ […]
မကျြနှာကိုကွညျ့ရုံနဲ့ ခမျြးသာကွှယျဝသူတဈယောကျ ဖွဈလာနိုငျခရြှေိမရှိ သိနိုငျမယျ့နညျး(၉)နညျး
လူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာကို ကြည့်ရုံနဲ့ သူ့အကြောင်းကို အတိအကျပြောနိုင်တဲ့ ရုပ်လက္ခဏာကို ဖတ်တဲ့ ပညာမျိုးဆို တာအံ့သြ ဖို့ကောင်းတဲ့ ပညာတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်က ကံကြမ္မာ ကို မသတ်မှတ် နိုင် ပေမယ့် ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင် သလဲဆိုတာ ကိုတော့ အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်း နိုင် ပါတယ်။ […]
အပြိုဖျောဝငျတဲ့ မိနျးကလေးတှအေနနေဲ့ဓမ်မတာလာခွငျးနဲ့ပတျသကျပွီး ဒါတှကေိုသိထားသငျ့ပါတယျ
ကလေးပေါက်စလေးအဖြစ်ကနေ အပျိုပေါက်လေးအဖြစ်ပြောင်းလဲလာချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပြောင်းလဲမှုတွေကြုံရနိုင်သလို ရာသီသွေးဆင်းတဲ့ကိစ္စကိုလည်း စကြုံလာရပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာ အတွေ့အကြုံသစ်ကို စိတ်ရှုပ်မှာမှန်ပေမယ့် ဒါလေးတွေကို သိထားဖို့တော့လိုပါမယ်။ ရာသီလာတာက ရှောင်လွှဲလို့ရတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး ရာသီလာတာက အပျိုဖော်ဝင်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း တွေ့ကြုံရမယ့် ကိစ္စဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးတိုင်းဘဝမှာ ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ ကိစ္စဆိုတာကို လက်ခံထားဖို့လိုပါမယ်။ ရာသီလာရင် ဘယ်လောက်ကြာမလဲ […]
ငွေကြေး ဥစ္စာဓန အောင်မြင်ကံကောင်းသော စနေသားသမီးများအတွက် ဘ၀တစ်သက်တာ ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း….
စနေသားသမီးများသည်ပင်ကို စိတ်ရင်းကောင်းသူများသာ ဖြစ်ကြပါသည်။တစုံတခုသော အခြေအနေ၌တည်ကြည် ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်တတ်ကြသူများသာဖြစ်မည်။အရာရာကို စိတ်အေးလက်အေး တည်ငြိမ်စွာကြံစည်လုပ်ကိုင်တတ်ကြသူများသာ ဖြစ်ပါမည် ။ ထိုသူတို့ သည်တစုံတခုသော အခြေအနေ၏ လိုအပ်ချက်များအရဆိုလျင်လျင်မြန်သွတ်လက် ထက်မြက်သော အနေအထားသို့ ချက်ခြင်းပြောင်းလဲ၍ ဘဝ၏ လိုအပ်ချက်များ၏တောင်းဆိုချက်များ အတိုင်း ပြောင်းလဲရှင်သန်၍ကြံစည်တွေးတော့လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိသူများသာ ဖြစ်သည်။စနေသားသမီးများသည်လူတဘက်သားတို့ အား ကျင်နာ […]